Tsy masina i satana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny tontolon'ny fanahy > Satana tsy Andriamanitra
Asehon’ny Baiboly mazava tsara fa iray ihany Andriamanitra (Mal 2,10; Efesianina 4,6), ary izy dia Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Satana dia tsy manana ireo toetra mampiavaka ny maha-Andriamanitra. Tsy Izy no Mpamorona, tsy eo amin’izao rehetra izao, tsy mahalala ny zava-drehetra, tsy feno fahasoavana sy fahamarinana, tsy “Ilay tokana, Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo” (1. Timoty 6,15). Asehon’ny Soratra Masina fa anisan’ireo anjely noforonina tamin’ny endriny tany am-boalohany i Satana. Ny anjely dia noforonina fanahy manompo (Nehemia 9,6; Hebreo 1,13-14), nomena safidy malalaka.
Ny anjely dia manatanteraka ny didin’Andriamanitra ary mahery noho ny olombelona (Salamo 10 Des.3,20; 2. Petrus 2,11). Voalaza fa miaro ny mpino koa izy ireo1,11) ary midera an’Andriamanitra (Lio 2,13-14; Apokalypsy 4, sns.).
Satana, izay midika hoe “fahavalo” ny anarany, ary devoly no anarany, angamba nitarika ho amin’ny ampahatelon’ny anjely hikomy tamin’Andriamanitra (Apokalypsy 1.2,4). Na dia teo aza izany fivadiham-pinoana izany, dia nanangona “anjely an’arivony” Andriamanitra (Hebreo 12,22).
Ny demonia dia anjely izay “tsy nitana ny toerany any an-danitra, fa nandao ny tranony” ( Joda 6 ) ary niaraka tamin’i Satana. “Fa Andriamanitra tsy niaro ny anjely izay nanota, fa nandroaka azy tamin’ny fatoran’ny haizina ho any amin’ny helo ka nanolotra azy hohazonina ho amin’ny fitsarana”2. Petrus 2,4). Ny asan'ny demonia dia voafetra amin'ireo rojo ara-panahy sy ara-panoharana ireo.
Ny fanandramana fizarana ny fizarana rehetra toa an'i Isaia 14 sy Ezekiela 28 dia milaza fa anjely dia anjely manokana, ka nanombatombana fa arkanjely io dia tsara eo anatrehan'Andriamanitra.
“Lavorary” i Satana nanomboka tamin’ny andro namoronana azy ka hatramin’ny nahitana faharatsiana teo aminy, ary “feno fahendrena sady tsara tarehy indrindra” izy (Ezekiela 2.8,12- iray).
Nefa tonga “ratsy fanahy” izy, niavonavona ny fony noho ny hatsaran-tarehiny, ary simba ny fahendreny noho ny voninahiny. Nahafoy ny fahamasinany sy ny fahaizany nanarona ny famindram-pony izy ka tonga “zava-nitranga” natao ho amin’ny fandringanana (Ezekiela 2.8,16- iray).
Niova avy tamin’ilay Mpitondra fahazavana i Satana (ny anarana hoe Losifera ao amin’ny Isaia 14,12 dia midika hoe “mpamirapiratana”) ho “ny herin’ny maizina” (Kolosiana 1,13; Efesianina 2,2) rehefa nanapa-kevitra izy fa tsy ampy ny maha-anjely azy ary naniry ny ho tonga masina tahaka ny “Avo Indrindra” izy (Isaia 1.4,13- iray).
Ampitahao amin’ny fihetsik’ilay anjely te hivavahana i Jaona hoe: “Aza manao izany!” (Apokalypsy 19,10). Tsy tokony hivavahana ny anjely satria tsy Andriamanitra.
Satria ny fiaraha-monina dia nanao sampy tamin’ny soatoavina ratsy notohanan’i Satana, ny Soratra Masina dia miantso azy hoe “Andriamanitr’izao tontolo izao” (2. Korintiana 4,4), ary ilay “Ilay Mahery izay manapaka eny amin’ny rivotra” ( Efes 2,2) izay manana fanahy maloto eny rehetra eny (Efesiana 2,2). Tsy avy amin’Andriamanitra anefa i Satana ary tsy mitovy amin’ny an’Andriamanitra.
Inona no ataon'i satana
“Ny devoly manota hatramin’ny voalohany” (1. Johannes 3,8). “Mpamono olona hatramin’ny voalohany izy ka tsy ao amin’ny fahamarinana; fa tsy ao aminy ny marina. Raha mandainga izy, dia izay azy no lazainy; fa mpandainga Izy sady rain’ny lainga” (Jao 8,44). Amin’ny laingany no iampangany ny mpino “andro aman’alina eo anatrehan’Andriamanitsika” (Romana 12,10).
Ratsy izy, tahaka ny nitondrany ny olombelona ho amin'ny ratsy tamin'ny andron'i Noa: ny tononkalo sy ny fanirian'ny fony dia ratsy ihany mandrakizay (1. Mosesy 6,5).
Ny faniriany dia ny hampihatra ny heriny ratsy amin’ny mpino sy ny mety ho mpino mba hampitahorana azy ireo amin’ny “fahazavana mamiratra amin’ny filazantsaran’ny voninahitr’i Kristy” (2. Korintiana 4,4) mba hanelingelina azy ireo mba tsy hahazoany «miombona amin’ny maha-Andriamanitra» (2. Petrus 1,4).
Noho izany, dia mitarika ny Kristianina ho amin’ny ota izy, tahaka ny nakany fanahy an’i Kristy (Mat 4,1-11), ary nampiasa hafetsena izy, toy ny tamin’i Adama sy i Eva, mba hahatonga azy ireo “amin’ny fahatsoran’i Kristy” (2. Korintiana 11,3) mba hanelingelina. Mba hahatongavana amin’izany dia miseho ho “anjelin’ny mazava” izy indraindray (2. Korintiana 11,14), ary miseho ho zavatra tsy izy.
Amin’ny alalan’ny fitaomana sy amin’ny alalan’ny fitaoman’ny fiaraha-monina eo ambany fifehezany, i Satana dia mikatsaka ny hitaona ny kristiana hanalavitra ny tenany amin’Andriamanitra. Ny mpino dia manasaraka ny tenany amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny safidiny malalaka hanota amin’ny alalan’ny fanekena ny toetra maha-olombelona mpanota, amin’ny fanarahana ny lalan’i Satana sy amin’ny fanekena ny fitaoman’ny fitaka be dia be (Matio. 4,1- enina ambin'ny folo; 1. Johannes 2,16- enina ambin'ny folo; 3,8; 5,19; Efesianina 2,2; Kolosiana 1,21; 1. Petrus 5,8; Malagasy 3,15).
Tokony hotadidina anefa fa eo ambany fahefan’Andriamanitra i Satana sy ny demoniany, anisan’izany ny fakam-panahin’i Satana rehetra. Avelan’Andriamanitra hanao izany satria sitrapon’Andriamanitra ny hananan’ny mpino fahafahana (safidy malalaka) hanao safidy ara-panahy (Joba 1 Des.6,6-12; marika 1,27; Lioka 4,41; Kolosiana 1,16- enina ambin'ny folo; 1. Korintiana 10,13; Lioka 22,42; 1. Korintiana 14,32).
Ahoana no tokony hamalian'ny mpino an'i Satana?
Ny tena fihetsiky ny mpino, voalazan’ny Baiboly, manoloana an’i Satana sy ny fikasany hitaona antsika hanota dia ny “manohitra ny devoly, dia handositra anareo izy” (Jakoba). 4,7; Matthew 4,1-10), ary noho izany dia hanome azy "tsy misy toerana" na tsy misy fahafahana (Efes 4,27).
Ny fanoherana an’i Satana dia ahitana ny vavaka ho fiarovana, ny fanekena an’Andriamanitra amin’ny fankatoavana an’i Kristy, ny fahafantarana ny mahasarika ny ratsy, ny fahazoana toetra ara-panahy (izay antsoin’i Paoly hoe mitafy ny fiadian’Andriamanitra rehetra), ny finoana an’i Kristy, izay maka amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. miahy antsika (Mat 6,31; Malagasy 4,7; 2. Korintiana 2,11; 10,4-5; Efesianina 6,10- enina ambin'ny folo; 2. Thessalonians 3,3).
Tafiditra amin’ny fanoherana koa ny fiambenana ara-panahy, “fa ny devoly mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany” (1. Petrus 5,8- iray).
Indrindra indrindra, mametraka ny fitokiantsika amin’i Kristy isika. In 2. Thessalonians 3,3 andeha hovakintsika “fa mahatoky ny Tompo; hampahery sy hiaro anareo amin’ny ratsy Izy”. Miantehitra amin’ny fahatokian’i Kristy isika amin’ny “fiorenana mafy amin’ny finoana” sy ny fanolorana ny tenantsika tanteraka aminy amin’ny vavaka mba hanavotany antsika amin’ny ratsy (Matio. 6,13).
Tokony hitoetra ao amin’i Kristy ny Kristianina (Jaona 15,4) ary aza mirotsaka amin’ny asan’i Satana. Tokony hieritreritra zavatra mendri-kaja, marina, madio, mahatehotia, ary mendri-kaja ianao. (Filipianina) 4,8) misaintsaina fa tsy mikaroka ny “lalin’i Satana” (Apokalypsy 2,24).
Ny mpino koa dia tsy maintsy manaiky ny andraikitra handray andraikitra amin’ny fahotany manokana fa tsy manome tsiny an’i Satana. Mety ho i Satana no niandohan’ny faharatsiana, nefa tsy izy sy ny demoniany ihany no mampaharitra ny faharatsiana satria ny lehilahy sy ny vehivavy araka ny sitrapony no namorona sy nitohy tamin’ny faharatsiany. Ny olombelona, ​​fa tsy i Satana sy ny demoniany, no tompon’andraikitra amin’ny fahotany (Ezekiela 18,20; Malagasy 1,14- iray).
Jesosy dia efa nandresy
Indraindray ilay fomba fijery dia aseho fa Andriamanitra no lehibe kokoa, i Satana no kely kokoa, ary izy ireo dia tratran'ny fifandonana mandrakizay. Io hevitra io dia antsoina hoe dualism.
Tsy araka ny Baiboly ny fomba fijery toy izany. Tsy misy ady mitohy ho an’ny fahambonian’izao rehetra izao eo amin’ny herin’ny haizina tarihin’i Satana sy ny herin’ny tsara tarihin’Andriamanitra. I Satana dia zavaboary noforonina fotsiny, ambanin’Andriamanitra tanteraka, ary Andriamanitra no manana fahefana fara tampony amin’ny zava-drehetra. Nandresy ny fitakian’i Satana rehetra i Jesosy. Amin’ny finoana an’i Kristy dia efa mahazo fandresena isika, ary Andriamanitra no manana fahefana amin’ny zavatra rehetra (Kolosiana 1,13; 2,15; 1. Johannes 5,4; Salamo 93,1; 97,1; 1. Timoty 6,15; Apokalypsy 19,6).
Noho izany, ny Kristianina dia tsy mila manahy loatra ny amin’ny fahombiazan’ny fanafihan’i Satana azy ireo. Na anjely, na hery, na manam-pahefana, dia “tsy hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy Jesosy” (Romana). 8,38- iray).
Indraindray isika dia mamaky ao amin’ny Filazantsara sy ny Asan’ny Apostoly fa i Jesoa sy ireo mpianany izay nomeny fahefana manokana dia namoaka demonia tamin’ny olona narary ara-batana sy/na ara-panahy. Izany dia maneho ny fandresen’i Kristy ny herin’ny maizina. Ny antony manosika dia nahitana fangorahana ho an'ireo izay mijaly sy fanamarinana ny fahefan'i Kristy, Zanak'Andriamanitra. Ny fandroahana demonia dia mifandray amin’ny fanalefahana ny aretina ara-panahy sy/na ara-batana, fa tsy ny olana ara-panahy amin’ny fanesorana ny fahotan’ny tena sy ny vokany (Matio 1.7,14-18; marika 1,21-27; marika 9,22; Lioka 8,26-29; Lioka 9,1; Asan’ny Apostoly 16,1- iray).
Tsy hampihorohoro ny tany intsony i Satana, hanozongozona fanjakana, hanova izao tontolo izao ho efitra, handrava tanàna, ary hihidy ao amin’ny tranon’ny voafonja ara-panahy ny olombelona.4,16- iray).
« Izay rehetra manota dia avy amin’ny devoly; fa ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izany no nisehoan’ ny Zanak’ Andriamanitra handrava ny asan’ ny devoly » (1. Johannes 3,8). Tamin’ny fandrisihana ny mpino hanota, dia nanana hery hitarika azy ho amin’ny fahafatesana ara-panahy i Satana, izany hoe tafasaraka amin’Andriamanitra. Nanao sorona ny tenany anefa i Jesosy, “mba hahazoany ny fahefana amin’izay manana fahefana amin’ny fahafatesana, dia ny devoly, amin’ny alalan’ny fahafatesany.” ( Hebreo. 2,14).
Aorian’ny fiverenan’i Kristy, dia hanaisotra ny fitaoman’i Satana sy ny demoniany izy, ankoatra ireo olona izay mifikitra amin’ny fitaoman’i Satana tsy mibebaka, amin’ny hanipy azy ireo indray mandeha ho any amin’ny farihy afo mirehitra (Gehena).2. Thessalonians 2,8; Apokalypsy 20).
Satana dia anjely lavo izay mikatsaka ny hanimba ny sitrapon’Andriamanitra sy hanakanana ny mpino tsy hahatratra ny heriny ara-panahy. Zava-dehibe ny hahafantaran’ny mpino ny fitaovan’i Satana fa tsy variana amin’ny satana na ny demonia, mba tsy hanararaotra antsika i Satana (2. Korintiana 2,11).